कृष्णभक्त अनमोल - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
 मलाई तडक–भडकवालीभन्दा कुर्था–सलवार लगाएकी कुर्थीवाली मनपर्छ ।
जब एकदम भोक लाग्छ नि, मलाई चोकोपाई खान मन लाग्छ ।
म ब्रान्ड कन्सियस छैन, मन पर्‍यो भने रत्नपार्कको फुटपाथबाट पनि किन्न सक्छु ।
म भगवान् श्रीकृष्णको भक्त हुँ ।
मलाई घडी तथा एसेसरिज लगाउन मन लाग्दैन ।
मलाई बाइकको सौख छ, मसँग दुईवटा स्पोर्ट्स बाइक छन् ।
म आफ्नो ब्रेकफास्ट र कफी आफैं बनाउँछु ।
अहिलेका ‘हटकेक हिरो’ अनमोल केसीसँग पाँचतारे होटल अन्नपूर्णको पौडी पोखरीछेउमा भेट्न उनका बाबु अभिनेता, निर्देशक तथा निर्माता भुवन केसीले बोलाएका थिए । अनमोलसँग अघिल्लो दिन फोन वार्ता हुँदा घरमै भेट्ने कुरा भएको थियो, तर चलचित्र ‘कृ’को प्रदर्शन मिति नजिकिँदै जाँदा अनमोल मिडियाहरूसँग अन्तक्र्रियामा व्यस्त रहेकाले त्यही भेट्न सकिने भुवन केसीले बताएपछि हामी त्यही पुगियो ।
त्यतिबेला अनमोल एउटा अनलाइनलाई अन्तवार्ता दिइरहेका थिए । एकैछिन पर्खिएपछि अनमोलले अमेरिकानो र आफ्ना लागि क्यापेचिनो अर्डर गरेर कुरा गर्न थाले । पहिलेदेखिको चिनाजानी भएकाले कुराकानीमा उनी निकै सहज देखिए । सुरुवातमा उनले आफ्नो बाल्यकाल नै सम्झिए । बाल्यकालमा ठूलो भएपछि चलचित्रको हिरो हुन्छु, बाबुझैं नाम कमाउँछु भन्ने थियो ?
मलाई त म्युजिकमा रहर थियो । सानो छँदा अभिनयको कुनै रहर थिएन । स्कुलमा पनि म नाटकमा भन्दा सांगीतिक कार्यक्रममा बढी सहभागी भएँ ।
कुन स्कुल पढेको ? एउटा भए पो भन्नु ? मैले धेरै स्कुल चेन्ज गरेँ । स्कुल जीवनमा म साह्रै बदमास थिएँ । मैले होस्टलमा बसेर पढेको हुँ । ड्याड र ममसँग लामो बिदाका बेला मात्र भेट हुन्थ्यो । आफ्नो बदमासीकै कारण म स्कुलबाट रेस्टिकेटसम्म भएको छु । स्कुलको कम्पाउन्डमा एउटा रूखमा बारुलाको गुँड थियो । साथीहरूमाझ मैले केही हुँदैन भनेर सान देखाउँदै रूखमा किक हानेको, बारुलाको गुँड खसिहाल्यो, अनि त एकैछिनमा बारुलाको हूल आएर मेरो रूप नै बिगारेर गयो । छ–सातवटाले नै टोकेछन् । भोलिपल्ट दिउँसो प्यारेन्ट्स डे थियो । स्टेजमा इन्ट्रोडक्सनका लागि आउँदा टाढाबाट देखेर ड्याड– ममले प्यारेन्ट्स डेमा हुने नाटकमा मैले हनुमानको रोल पाएछु कि भन्ने सोच्नुभएछ ।
ए लेभलसम्म पढेर हाललाई पढाइ रोकेका अनमोल अध्ययनलाई पनि उत्तिकै जरुरी मान्छन् । आफ्नो पढाइका बारेमा उनी भन्छन्, ‘म पढाइमा कमजोर विद्यार्थी हुँ, निकै कमजोर । डिग्री पाउनु मात्र पनि पढाइ होइन । उपन्यास तथा पुस्तकहरू पढ्नु वा विकिपिडिया पढ्नु पनि त पढाइ नै हो । म कुनै न कुनै माध्यमबाट ज्ञान हासिल गर्नुलाई पनि पढाइ भन्छु । अचेल त झन इन्टरनेटमा जे खोज्यो त्यही भेटिन्छ । पढाई त अब अनलाइनबाट समेत हुन थालेको छ ।’
अनमोल केसी आफूलाई निकै रोमान्टिक भन्न रुचाउँछन् । बुबा भुवन केसीले रोमान्टिक नायकको छवि बनाएका छन् । त्यसैले पनि अनमोल आफ्नो रगतमै रोमान्स भएको बताउँछन् । कति रोमान्टिक छन् त अनमोल ?
उनी भन्छन्– ‘धेरै नै रोमान्टिक छु । स्कुल वा कलेजमा छँदा म रिलेसनसिपमा पनि थिएँ, तर त्यति सिरियस होइन । अहिले म कसैसँग रिलेसनसिपमा छैन । म पूरा आफ्नो काममा फोकस्ड छु । विवाह गर्ने र घरजम गर्ने सोच अहिले त सम्भव छैन । भविष्यमा गरुँला । अहिल्यै केही सोचेको छैन ।’
‘राजेश हमालको जस्तो उमेर ढल्किएपछि विवाह गर्ने त होइन ?’ हुन पनि सक्छ । म उहाँले उमेर ढल्किएपछि होइन, समय आएपछि विवाह गर्नुभएको मान्छु । मेरो ड्याड र ममको सम्बन्ध बिग्रिएपछि म विवाहप्रति त्यति सकारात्मक छैन ।
अनमोल बिहान छिट्टै उठ्छन् । उनलाई बाथरुममा नुहाउन आधा घण्टा लाग्छ । त्यस्तै परे दिनमा पाँच पटकसम्म नुहाउन सक्छन् । सफा–सुग्घर रहनु उनको बानी नै भैसकेको छ । अनमोल फ्रेस भएपछि आफ्ना लागि आफैं ब्रेकफास्ट बनाउँछन् । शाकाहारी भएकाले उनको ब्रेकफास्ट शाकाहारी नै हुन्छ । त्यसपछि उनी शारीरिक अभ्यासमा जुट्छन् । दिउँसो १२ बजेपछि खाना खान्छन् । पहिले पनि मासु खासै मन नपराउने भए पनि डाइटका लागि मात्र खाने अनमोलको अहिलेको डाइट भनेको भिजेको चना, बटर, दूध, गेडागुडी तथा सिजनल भेजिटेबल हुने गरेको छ । ‘दाल, भात, तरकारी अचार मन पर्छ, तर धेरै खान्नँ ।’ उनले भने ।
अनमोल आफूलाई ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्ने कुरामै बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । चलचित्र ‘कृ’मा उनको दुईवटा रूप हेर्न पाइनेछ । एउटामा उनी पहिलेको जस्तो चकलेटी लुक्समा दुब्लो र क्युट देखिन्छन् भने अर्कोमा उनी शारीरिक सुगठन राम्रो भएको विहंगम रूपमा देखिनेछन् ।
त्यसका लागि पहिले ज्यान बनाएर सुगठित रूपको छायांकन सकेर केही महिनाको विश्राममा उनले आफ्नो शरीर पातलो बनाए । ‘शारीरिक अभ्यास र लगनशीलता भए जे पनि गर्न सकिँदो रै’छ । मैले यो कुरा अब भने राम्रोसँग बुझेको छु ।’ –अनमोलले भने । ‘कृ’का लागि बिहान ६ बजे उठेदेखि रातिको ८ बजेसम्म अनवरत शारीरिक व्यायाम, अभिनय एवं नृत्य प्रशिक्षण गर्ने अनमोलले त्यतिबेला विश्राम भनेको मात्र एकाध घण्टा पाउँथे । अझ त्यो बेला बुबा भुवन केसीले कतै पनि सार्वजनिक नहुने उर्दी जारी गरेका थिए । उनले पनि आफूलाई सकेसम्म लुकाएरै राखे । ‘नेपालमा पापाराजी फोटोग्राफर रहेनछन्, नत्र लुकेर मेरो फलो गरेका भए त्यतिबेलाको मेरो लुक्स पहिल्यै बाहिर ल्याइदिन्थे,’ –अनमोलले हाँस्दै भने ।
अहिले उनको दैनिकी परिवर्तन भएको छ । अनमोल बिहान ६ बजे उठेर खाजा खाएपछि घरभित्रै व्यायाम गर्छन् अनि जुस आदि खाएर खबर पढ्न थाल्छन् । अहिले त चलचित्र ‘कृ’को प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहनुपरेकाले त्यसका लागि पनि समय दिइरहेका हुन्छन् उनी ।
‘कृ’का लागि पूर्वाभ्यास गर्ने क्रममा अनमोल केसी घुम्दै बूढानीलकण्ठ पुगे । बुढानिलकण्ठमा भगवान् श्रीकृष्णका भक्तहरूमाझ पुगेर प्रवचन सुनेछन् । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘कृ’ भनेकै कृष्ण हुन् अनि उनी भगवान् श्रीकृष्णको भक्त भए । अनमोल त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्ययनमा जुटे । माछामासु छाडेर पूरै शाकाहारी भए । शारीरिक अभ्यास गरिरहनुपर्ने भएकाले डाइटका लागि माछामासुको विकल्पमा हुन सक्ने खान्की रोजे ।
अहिले उनी बिहान–बिहान प्रार्थना र ध्यान गरिरहेका हुन्छन् । पुरानो बानेश्वरस्थित घरमा उनको आफ्नै फ्ल्याट छ । उनको फ्ल्याटभित्रको दृश्य कुनै मन्दिरको भन्दा कम छैन । त्यहाँ धूपको मगमग बास्ना आउँछ भने चारैतिर भगवान्का मूर्ति एवं तस्बिरहरू सजाइएका छन् । अनमोल हालै आफ्नी आमा तथा मामाघरका हजुरबुवा–हजुरआमाहरूसँग बनारस घुमेर आए । ‘अचेल मलाई त्यस्ता स्थान घुम्दा आनन्द आउन थालेको छ,’ अनमोलले बताए । अनमोल खानपिनमा बढीजसो उसिनेको शाकाहारी भोजन गर्छन् । दूध र जुस उनको फेभरेट हो । विद्यालय जीवनदेखि दूधमा बोर्नभिटा हालेर दिनको आठ–दस गिलाससम्म पिउँथे । ‘खानाका लागि मरिहत्ते गर्ने बानी कहिल्यै भएन, तर एकदमै भोक लागेका बेला चोकोपाई खान मन लाग्छ ।’ –उनले भने । दैनिक मन्त्रोचारण गर्ने भएकाले अनमोललाई पहिलेजस्तो टेन्सन हुँदैन, न त कसैसँग रिस नै उठ्छ । दिनहुँ १ सय ८ पटक ओमकार जपेपछि आफूमा धेरै परिवर्तन आएको उनले बताए ।
अनमोलका ‘ड्याड’ रोमान्टिक छविका कारण अहिले पनि चर्चित छन् । पर्दामा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा समेत महिलाहरूसँगको सम्बन्धका कारण उनी विवादमा आइरहे । नाम होस् वा बदनाम, भुवन केसीको हातमा जहिले पनि तुरुपको एक्का रह्यो । जहिले पनि सफल हुने चलचित्रकर्मीको नाम लिँदा भुवन केसी सम्भवत: पहिलो नम्बरमा आउँछन् । यद्यपि आफू रोमान्टिक बाबुको पथमा नहिंडेको अनमोल बताउँछन् । ‘सानोमा त्यस्ता कुरामा चासो थिएन । अहिले उहाँ आफ्नै किसिमले बस्नुभएको छ, म आफ्नै किसिमले । ड्याडीका क्रियाकलापले मलाई कहिल्यै प्रभाव पारेनन् । त्यो उहाँको लाइफको पाटो थियो, म मेरो लाइफ आफ्नै किसिमले बनाउँदैछु ।’ प्रेम सबैसँग गर र कसैको चित्त नदुखाऊ भन्ने भगवान् श्रीकृष्णको उपदेशले आफूलाई सदावहार रोमान्टिक बनाइरहने अनमोलको तर्क छ ।
अनमोलका बारेमा अनमोल वाणी
मेरो छोरा अनमोल निकै मेहनती र कामप्रति समर्पित व्यक्ति हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, आजसम्म उसले जे गर्‍यो त्यसमा ऊ सफल भयो र आगामी दिनमा ऊ अझ सफल हुँदै जानेछ । अनमोल एउटा असल छोरा पनि हो । केयरिङ र लभ मलाई उसको सबैभन्दा मन पर्ने बानी हो । मेरो नजरमा ऊ सोझो, आज्ञाकारी र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने असल व्यक्ति हो । ऊ पारिवारिक सम्बन्धलाई निकै महत्व दिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा ऊ धार्मिक प्रवृत्तिको छ । भगवानको प्रार्थना गर्छ, मन्त्र जप्छ जसले गर्दा पनि ऊ भित्र सकारात्मक ऊर्जा बढेको हो । शाकाहारी र ईश्वरप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने यत्तिको आज्ञाकारी छोरा भगवानले सबैलाई दिऊन् । मैले यस्तो छोरालाई जन्म दिन पाएँ, त्यसमा मलाई गर्व छ ।
सुस्मिता केसी, अनमोलकी आमा/अभिनेत्री
होस्टलदेखि कृसम्म आइपुग्दा अब कुनै शंका छैन कि अनमोल नेपाली चलचित्रका सुपरस्टार भैसकेका छन् । यद्यपि उनी भने आफू स्टार वा सुपरस्टार भएकोमा कुनै मतलब राख्दैनन् । उनलाई हरेक पटक राम्रो काम गरुँ भन्ने चिन्ता मात्र भैरहन्छ । यही कारणले उनी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका हुन् । अनमोलमा आफूलाई समय परिस्थितिअनुसार परिमार्जित गर्दै अघि बढ्ने क्षमता छ । मलाई विश्वास छ कि भविष्यमा पनि उनको यो बानीमा कमी आउने छैन र उनले अझ सफलता प्राप्त गर्दै थप नाम कमाउनेछन् ।
हेमराज बिसी, निर्देशक
अनमोललाई मैले धेरै नम्र, कामप्रति समर्पित, लगनशील एवं मासुम व्यक्तिका रूपमा पाएको छु । अहिलेको पुस्ताका धेरै मानिस भगवानलाई मान्दैनन्, अनमोलको भगवानप्रतिको आस्था चकित पार्ने खालको छ । काममा उनको प्रतिबद्धता पनि हेर्न लायककै छ । उनले नहेरेका चलचित्र कमै होलान् । अनमोलले मनोरञ्जनका लागि घर बाहिर जानै पर्दैन । उनी म्युजिक लभर हुन् र पूरै दिन कोठामा गीत–संगीत सुनेर, एक्लै खाना खाएर बस्न सक्छन् । उनको एउटा राम्रो बानी भनेको कसैका बारेमा कसैसँग गुनासो नगर्नु पनि हो । कुरा काट्न त झन उनलाई आउँदै–आउँदैन । अब भने उनले समाजमा अलि बढी भिज्नुपर्छ । उनलाई मानिसहरूले माया गर्छन्, सम्मान गर्छन् । उनलाई आफ्नो आइडल मान्नेहरू पनि धेरै भैसके । पछिल्ला केही समय उनी विस्तारै बाहिरी मानिसहरूसँग घुलमिल भैरहेको देखेको छु । अनमोल वास्तवमै अनमोल छन् ।
अनमोल केसी हाम्रो चलचित्र उद्योगकै आशाका केन्द्र हुन् । भोलिका बारेमा त म केही भन्न सक्दिन तर आजको मितिसम्म उनी एउटा त्यस्ता अभिनेताका रूपमा देखिएका छन्, जसले नेपाली चलचित्रलाई अर्को तहसम्म पुर्‍याउन सक्छन् ।
अनमोल केसी परिश्रमी कलाकार हुन् । उनी सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने नेपाली अभिनेता हुन् भन्दा फरक पर्दैन । मैले अनमोलसँग ड्रिम्स तथा कृमासँगै काम गरेको छु । यी दुवै चलचित्रका लागि उनले प्रसस्तै मेहनत गरेका छन् । कृका लागि त उनले कडा मेहनतको सीमा नै नाघेका छन् ।
चन्द्र पन्त, द्वन्द्व निर्देशक
मैले अनमोल केसीलाई नजिकबाट चिनेको चलचित्र ’ड्रिम्स’ को प्रदर्शनदेखि हो । चलचित्र कृसम्म आइपुग्दा अनमोलसँग म अझ नजिक भएको छु । अनमोलमा सुपरस्टारमा हुने गुण चलचित्र होस्टेलको प्रदर्शनका बेला नै देखिएको थियो । यद्यपि ड्रिम्ससम्म आइपुग्दा उनमा धेरै परिवर्तन आएको मैले पाएको थिएँ । करिब डेढ वर्ष मिडियाबाट टाढा रहेर चलचित्र कृको तयारीमा लाग्ने क्रममा अनमोल शारीरिक रूपमा मात्र होइन मानसिक रूपमा समेत बलिया भएका छन् । अनमोलको बोलीमा परिपक्वता, अरूप्रति सम्मान तथा नेपाली चलचित्रलाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच विकसित भएको छ । मलाई उनको कुराकानी गर्ने शैली मनपर्छ । उनी कुन ठाउँमा कस्तो तरिकाले बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकार छन् । अनमोलको चकलेटी अनुहारका फ्यान धेरै होलान्, तर मलाई चलचित्रको भन्दा चलचित्र बाहिरको अनमोल बढी मनपर्छन् ।
विजय आवाज, सञ्चारकर्मी